क. चन्द्रा थानी एक संस्मरण – सकारात्मक परिवर्तनवाहक विचार, कला/साहित्य र सत्य खवरको बाटाे
यहि २०७७ साल भदौ २८ गतेका दिन विहान मैले क.चक्रपाणी शर्माजीलाई फोनमा सोधें कमरेडको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ भनेर । कमरेडले जवाफ दिनुभयो अवस्था अत्यन्तै क्रिटिकल भयो । अब घण्टा कुर्ने काम भैरहेको छ । यो खबरले म स्तब्ध भएं । मैले तुरुन्तै हाम्रो महिला संघको अध्यक्ष,महासचिव लगायत अन्य केही साथीहरुलाई पनि खबर गरें । क.चन्द्रा थानीसंग मेरो प्रत्यक्ष कुराकानी नभए पनि क.चक्रपाणीसंग मेरो निरन्तर सम्पर्क भैरहेको थियो । दुइ तीन दिन पहिले उहांसंग कुराकानी हुंदा पत्थरीकालागि अपरेसन गर्नु भन्दा पहिले जन्डिसलाई सामान्य अवस्थामा ल्याउन पाइपबाट निकाल्ने काम भइरहेको छ भन्नु भएको थियो । मलाई अवस्था सामान्य होला भन्ने लागेको थियो तर स्थिति त्यस्तो रहेनछ । अन्तत त्यहि दिनको पांच बजेतिर उहांको निधन भयो भन्ने खबर मलाई आयो । दुखकोसाथ पशुपति आर्यघाट पुगेर महासचिव क.किरण सहित अन्य कमरेडहरुसंगै अन्तिम श्रध्दान्जली दिएर फर्कें । उहांको निधनले पार्टीले एक जना कर्मठ, प्रतिबध्द योध्दा गुमाएको छ र कम्युनिष्ट आन्दोलनमा अपूर्णीय क्षति पुगेको छ ।
कमरेड चन्द्रा थानीसंगको मेरो भेट र सहकार्य धेरै पहिले देखिको होइन । हाम्रो पार्टीबाट बादलजीहरुको बहिरगमन पछि मलाई महिला मोर्चाको ईन्चार्जको जिम्मेवारी दिइयो । त्यसपछि नै मेरो उहांसंग भेटघाट भयो र नजिकको सम्बन्ध बन्यो । पछि मलाई पार्टीले पश्चिम ब्यूरोको जिम्मा पनि दियो । उहां पार्टीको कर्णाली प्रदेश कमिटीको सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो । त्यसैले उहांसंगको भेटघाट अरु नजिकिंदै गयो । बिशेष गरेर गत २०७६ साल माघ १५ गते देखि पार्टीले संचालन गरेको “राष्ट्यि स्वाधिनता र संगठन विस्तार अभियान”को क्रममा उहां संगसंगै काम गर्ने अवसर प्राप्त भयो । महेन्द्रनगरमा भएको अभियानको उदघाटन कार्यक्रममा उहांले महिला मोर्चाको तर्फबाट भाग लिनुभएको थियो । त्यसपछि उहां कर्णाली प्रदेशको तयारीको लागि जानु भयो । जब अभियान कर्णाली प्रदेशमा प्रवेश गरयो सल्यान र सुर्खेतमा म पनि उहांहरुसंग साथ साथै हिडें । स्थानीय स्तरमा भएका सबै कार्यक्रमहरुमा उहांले महिला मोर्चाको तर्फबाट कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नु भयो । कोभिड १९ को संक्रमणको कारणले २०७६ साल फागुन२३ गते देखि पार्टीले अभियान स्थगित गरयो । त्यसै दिन म उहांहरुसंग विदा भएर काठमाण्डौ लागें । यो विदाई नै मेरो उहांसंगको अन्तिम विदाई भयो । यसे दौरानमा नै मैले उहाँको वारेमा धेरै कुरा बुझने अवसर पाएं ।
हामी आफुलाई कम्युनिष्ट भन्नेहरु प्राय सबैले पार्टी र क्रान्तिको लागि, मूलतः श्रमिक वर्गकोलागि बलिदान दिने कुरा गर्दछौं । तर ब्यवहारमा अलि फरक पाउंछौ । पार्टी,क्रन्ति र सर्वहारा वर्गको स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने भन्दा पनि आफुलाई केन्द्रमा राखेर सोच्ने प्रवृतिहरु प्रसस्त पाईन्छन् । आफुले चाहेजस्तो पद वा अवसर मिलेन भने अनेक खालको बखेडा गर्ने मानिसहरु कम्युनिष्ट आन्दोलनभित्र थुप्रै भेटिन्छन् । को सिनियर को जुनियर भन्ने कुरामा हाम्रो लडाई हुन्छ । उ भन्दा म धेरै सिनियर हुं त्यसकारण उसको नेतृत्व अन्तरगत रहेर काम गर्न सक्दिन भन्ने प्रवृतिसंग हामी जुझदै आएका छौं । यस प्रकारको प्रवृति सर्वहारा वर्गीय चरित्र होइन । क. चन्द्रा थानीमा यसप्रकारको प्रवृति पाइएन ।उहां २०३६ साल देखि विद्यार्थी राजनीतिमा लागेर २०३८ सालमा पार्टी सदस्यता प्राप्त गरेको ब्यक्ति हुनुहुन्थ्यो । पार्टी र महिला मोर्चामा उहांभन्दा धेरै जुनियर साथीहरु नेतृत्वतहमा पुग्दा पनि क.थानी उहांहरुको मातहतमा रहेर खुसिकासाथ संगठनले दिएको जिम्मेवारी पुरागर्न सधैं तत्पर रहनु हुन्थ्यो । म सिनियर हुं ,मलाई यस्तो पद चाहिन्छ भनेर बार्गेनिड गरेको मैले पाइन ।
उहांले पद प्रतिस्ठालाई भन्दा क्रान्तिकारी नीतिलाई प्रधानता दिनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा उहांको जीवन ब्यवहारले पुष्टि गर्दछ । पार्टी भित्रको दुइलाइन संघर्षमा उहां क्रान्तिकारी धारमा नै उभिनु भयो र अवसरवादको विरुध्दमा निर्मम संघर्ष गर्नु भयो ।
कम्युनिष्ट आन्दोलनमा थुप्रै यस्ता पात्रहरु पाइन्छन् जो जीवनको एउटा कालखण्डमा निकै क्रियाशिल र क्रान्तिकारी हुन्छन् । तर त्यो क्रियाशिलता र क्रान्तिकारी पनले निरन्तरता पाउन सक्दैन । कतिपय त प्रतिक्रियावादी कित्तामा पुग्छन् भने कतिपय निस्क्रिय हुन्छन् । तर क.चन्द्रा थानी पार्टीमा लागेपछि जीवनभर क्रान्तिकारी गतिविधिमा क्रियाशिल रहनु भयो । यसरी उहांको अर्को सवलपक्ष भनेको क्रान्तिकारी निरन्तरता नै हो ।
अन्तमा यहि २०७७ साल असौज ९ गते उहांको श्रध्दानजली सभा हुंदै छ । ब्यक्तिगत हितलाई भन्दा पार्टी र क्रान्तिको हितलाई प्राथमिक्तामा राख्ने,दुई लाईन संघर्षमा क्रान्तिकारी कित्तामा दह्रोसंग उभिने र जीवनको अन्तिमघडीसम्म कान्तिकारी गतिबिधिमा निरन्तर लाग्ने उहांका गुणहरुलाई हामीले अनुकरण गर्नु पर्दछ । यही नै उहाँ प्रतिको सच्चा श्रद्धान्जली हुनेछ ।